Nlaazu bụ usoro ịzụ ahịa Achọrọ | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 23, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Abụ m nnukwu onye mmado na blọgụ Andy Sernovitz, Ụchụ! Ọ gaara adị m mma ma a sị na m chere banyere nke ahụ! Ma, taa, echeghị m na m kwenyere na Andy.
Ndị na-ere ahịa: Kwụsị izipu mbuli na-amalite n'oge ndị a siri ike, otu esi azụ ahịa na nlaazu, ma ọ bụ nkwalite akụ na ụba ọ bụla ọzọ.
Achọrọ m ka Andy gaara eche echiche nke a:
Mee ọchụchọ na Nlaazu na Google na ị ga-ahụ na ọnụ ọgụgụ na-nnọọ ịtụnanya. Anyị abanyela nlaazu. Anyị na-miri emi na nlaazu. Ọtụtụ mmadụ na-atụfu ọrụ ha. Egwu ndị ọzọ na-atụfu ọrụ ha na-eme ka ndị na-azụ ahịa belata mmefu. Nke ahụ abụghị ihe ọjọọ, nke ahụ bụ ihe ezi uche dị na ya.
Ikwu okwu banyere otu esi echekwa na nlaazu nwere ike ọ gaghị ada ụda mma - mana ọ bụghị ihe ọjọọ, ma. Na nlaazu bu ihe adighi nma, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị nke ị nyere ka nwere ike ịbụ mma.
Nke a abụghị ọkụkọ ma ọ bụ akwa ahụ… anyị abanyeghị na ọgbaghara a makana ndị mmadụ bidoro ikwu okwu banyere ọdịda ma ọ bụ na-ekwu maka ya. N'ezie, nlaazu ahụ nwere ike ịmalite otu afọ gara aga tupu onye ọ bụla ekwu banyere ya. Ugbu a anyị nọ n’ime ya, anyị kwesiri ime ihe iji mee ka ọ dị ndụ.
Companylọ ọrụ ọ bụla kwesịrị iche echiche maka otu ha ga - esi mee ka ndọghachi na ozi ha dabara nke ọma. Kedu ihe ụlọ ọrụ gị na-enye ndị azụmaahịa ma ọ bụ ndị ahịa na-achọ ụzọ ha ga-esi belata? Ga-amalite ikwu gbasara ya!
Compendium Blogware bụ Nnukwu Ihe Nlereanya:
Companylọ ọrụ m na-enye ihe dị ọnụ ala karịa maka ndị na-ere ahịa iji mepụta ndu inbound maka ụlọ ọrụ ha. Dabere na eMarketer, ahia di na mkpochapu otutu ulo oru:
Ọ bụrụ na m bụ ahịa na ụlọ ọrụ nke na-ahapụ ụfọdụ ndị ọrụ ka ha gaa ma ọ bụ na-achọ ụfọdụ ebe m ga-ebipụ, maa ihe m na-achọ na Google? A nam acho uzo m ga esi ebefu mmezi ego m, odi ka onye mmeri, ma chekwaa oru m rue mgbe ihe a furu!
Statisticsfọdụ ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ na-akpali iche echiche banyere Marketing na nlaazu:
48% nke nnukwu ụlọ ọrụ US gbara ajụjụ ọnụ Azụmaahịa n'ọnwa Septemba kwuru na a ga-egbutu mmefu nke usoro mgbasaozi ọdịnala ha; 21% kwuru na ọnụọgụ ahụ ga-abụ "ihe dị mkpa".
59% nke ndị isi ahịa azụmaahịa 175 gbara ajụjụ ọnụ site na ụlọ ọrụ ọrụ ahịa Epsilon tụrụ anya na mbelata nke mmefu ego azụmaahịa ọdịnala ha; naanị 13% tụrụ anya mmụba.
85% nke ndị ahịa 600 gbara ajụjụ ọnụ AzụmaahịaProfs kwuru na ha ga-ebelata ụgbọ ala ahịa ahịa ha.
53% nke Association nke Ndị Mgbasa Ozi Mba (ANA) ndị otu kwuru na ha na-egbutu mmefu ego na nzaghachi ọdịda; 40% kwuru na ha na-agbanwe ngwakọta nke ọwa ahịa iji belata ọwa ego dị ala.
Ọ ga-abụ ihe na-abaghị uru nye m, dị ka onye na-ere ahịa, ịghara ikwu maka nlọghachi azụ na ihe kpatara anyị ji dị ọnụ ala karịa ụlọ ọrụ ndị na-anwa ịchụ ahịa azụmaahịa na-enweghị akụ ha nweburu. Nke a bụ kpọmkwem ihu igwe anyị kwesịrị iji na-eto ma na-eto eto na ya.
Kwesịrị ịzụ ahịa banyere ya.
Okpu okpu nye Jeff na ụlọ okpuru ulo + ngagharị maka njikọ na eMarketer akwụkwọ!
Tags: gbakwunye otuWordPress
Dee 24, 2008 na 4: 44 AM
Ekwenyere m kpamkpam na gị Doug. Aga m aga n'ihu ma kwuo na ọ bụrụ n'ezie na anyị chọrọ inyere anyị aka, anyị ga-agbasi mbọ ike na-agwa ha otu esi ezere imehie ihe na akụ na ụba ma ọ bụ ịlaghachi azụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ oge ndị a.
Iji weghara ya, aga m ekwu na ebe ọ bụ na ịre ahịa bụ akụkụ dị mkpa nke atụmatụ azụmaahịa niile, anyị kwesịrị ịbịakwute onye ọchụnta ego ma ọ bụ onye nwe azụmaahịa ọkachasị onye nwe ụlọ ahịa na-eme ya naanị ya. Ọtụtụ n'ime ndị nwe ụlọ ọrụ a na-atụ ụjọ, na-eche akpụkpọ ụkwụ na-esote ka ha daa ma nwee olile anya na mmadụ ga-enye ha ụfọdụ ndụmọdụ, ezigbo ndụmọdụ ọ bụla.
Ekwenyere m na anyị ga-agwa ha eziokwu ahụ: "Tenzọ iri iji gbochie obere azụmahịa gị ka ọ banye n'okpuru akụnụba a" ma ọ bụ ihe dị n'akụkụ ahụ. Anyị ga-agwa ha na ha kwesịrị itinye ego maka ire ahịa na ụdị akụ na ụba na ihe kpatara ya.
Dec 24, 2008 na 5:02 PM
Akwa post, Doug, kwụ ọtọ na azụmahịa-y. M sonyeere gị na Enyi Jikọọ.
Ajụjụ: Gịnị kpatara ọtụtụ mmadụ – gịnị kpatara onye ọbụla –kwere na azụmaahịa bụ ụzọ kacha mma kacha mma? Okwesighi ibu ezigbo ihe megidere ya? Kedu ihe kpatara na anyị niile anaghị agbanye onwe anyị na uwe a na-adịghị ahụ anya? Ọ bụ otu ihe. Kedu otu ụlọ ọrụ ọ bụla kwesiri ị nweta ego ma ọ bụrụ na ọ nweghị onye ga-ahụ ha?
N'akụkụ azụ nke mkpụrụ ego ahụ, ịzụ ahịa ọ bụghị naanị na-ekwu okwu, mana n'oge a nke ịzụ ahịa mmekọrịta ọ na-ege ntị ma na-aza ya. Ọ na-ahụ, ọ na-agagharị. Chapu ahia n'okwu a bụ ka enyí nnụnụ na-eli isi ya na ájá, ma ọ bụ nwatakịrị mechie anya ya ma kpuchie ntị ya.
Ndi oru nile kwesiri ijide uzo ahia: ahia bu ihe OZI I kwesiri igbutu. Nke ahụ nye m bụ ezigbo, zuru oke na ngụkọta enweghị nkwanye ùgwù. A dịghị-brainer! Marketingkpụ ahịa?! Kedu?! Cheregodi?!
Na nke ahụ, ndị enyi, bụ àgwà ndị na-ere ahịa ga-egosipụta ma ọ bụrụ na anyị ga-adị ndụ.
Dec 24, 2008 na 6:19 PM
Nnukwu ajụjụ, Ga! Onu ogugu abuo m bu na otutu ndi ahia ka enyere ha aka karia ime atumatu. Ngalaba na-ere ahịa anaghị enwe ndị ọrụ iji malite ịmalite uto na Mpụpụta maka ụlọ ọrụ. Maka na ha enweghị ike igosi uru ha bara na nzukọ a, ha na - abụkarị ndị mbụ na mgbutu.